माधवकुमार नेपाल र उनको समूहका नेताहरू भारतबाट गाइडेड…. « Etajakhabar
माधवकुमार नेपाल र उनको समूहका नेताहरू भारतबाट गाइडेड….
प्रधानमन्त्रीका कारण सिर्जित राष्ट्रिय राजनीतिका उतार–चढावप्रति राष्ट्रपतिको दृष्टिकोण के होला ? तर, गत हप्ता राष्ट्रपतिसँग भेटेर फर्किएका एक राजनीतिकर्मी भन्छन्, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको भूमिका र कदम सयमा सय प्रतिशत मुलुकको हितमा भएको ठहरमा हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रपतिको बुझाइअनुसार, ‘भन्न त ओलीलाई दक्षिण निकट भनिन्छ तर खासमा चाहिँ माधवकुमार नेपाल र उहाँको समूहका नेताहरू भारतबाट गाइडेड हुन् । तर, उहाँ पनि सरकार अप्ठेरोमा छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्नुभएको छ ।
उहाँले प्रचण्ड, कांग्रेस र जसपाको धारणामा समानता (सरकार विरोधी) जुट्न गाह्रो छ भन्ने बुझ्नुभएको छ भने राप्रपाको पनि कमल थापा समूहप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
तर, पशुपतिसमशेर र प्रकाशचन्द्र लोहनीप्रति थोपै विश्वास छैन । उहाँले अनुमान गर्नुभएको छ– मधेसी र शेरबहादुरबीच निकटता बढ्न गाह्रो छ । कांग्रेससँग मधेशी मिल्दा त्यहाँ एमालेलाई क्षति हुने उहाँको बुझाई छ । र, भन्ने गर्नुहुन्छ, ‘पुस ५ को संसद विघटनपछि पार्टी फुटाउने काममा भारतीयहरू सफल भए ।’ र, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गल्ती गरेको भन्ने कुरा उहाँलाई लागेकै छैन ।
आजको जनआस्थासाप्ताहिकमा समाचार छ ।
सुटकेशमा शव राखेर सार्वजनिक बसमा बुटवलवाट बागलुङ, यसरी खुल्यो पोल
अष्ट्रेलियामा घर बनाउन साढे ६ करोड रुपैयाँ तिरेका नेपालीले घर देखेपछि छाँगाबाट खसे – ( तस्बिरसहित )
पुर्वप्रेमिका भन्छिन्, दिनमा धेरैपटक यौ’नस’म्पर्क हु’न्थ्यो
यसरी अ’श्लि ल म्या सेज पठाउने हाकिमलाई कार्यकक्षमै फोहोर पुछ्ने मो प ले हि र्का इयो
चीनमा अ श्लिल म्यासेज पठाउने एक सरकारी कार्यालयका हाकिमलाई एक महिलाले कार्यकक्षमै गएर कु ट
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, बैशाख ५ गते आइतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल बैशाख ५ गते आइतबार इश्वी सन २०२१ अप्रिल १८
नायक भएर दुनियाको छोरीको पैसा र बै,शमा म,स्ती गर्ने ? युवती पनि तेस्तै राम्रो लाग्यो भन्दैमा बिस्तरामै लाने ? (भिडियो सहित)
नायक किशोर खतिवडालाई आफ्नो श्रीमान दावी गरेकी महिला र किशोर आमने सामने भएका छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट बच्न हरेक व्यक्तिले मास्क लगाउनुपर्ने मापदण्ड विश्वभर नै लागू छ ।
भाग्यले बाँचेका यी बालक : आमाको काखमा बसेका यी बालकको आमाको यसरि मृत्यु भयो कि बच्चा अहिले अस्पतालको बेडमा बसेर आमालाई पर्खिरहेका छन् !
यो गिरोह संग भेटिएको थियो महिलाको औंला, खोज्दै जाँदा प्रहरी नै चकित